December 13, 2007, 2:09 am Filed under: Best Wishes, Lin Let Kyal Sin တစ်နှစ်ကုန်ခါနီးလို့ မွေးနေ့ကို တစ်ဖန်ပြန်ရောက်လာပြန်ပြီ .. ။ ချမ်းအေးလှတဲ့ နှင်းတွေကြားက ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့ မနက်မှာ ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ အမေရဲ့ မွေးဖွားသန့်စင်မှုကြောင့် လူ့လောကထဲကို ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် မေမေကို ကျေးဇူးတင်စွာ ရှိခိုးကန်တော့ပါတယ် .. ။ ဘာလိုလိုနဲ့ ကျွန်မအသက် ၁၉နှစ်တောင် ပြည့်သွားပြီ … ။ ကျွန်မ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့မရောက်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်သတိရနေပြီး ဆုတောင်းပေးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ၊ ည၁၂နာရီအကျော်မှာ အွန်လိုင်းနှင့်ဖုန်းမှတဆင့် ဆုတောင်းပေးကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် … ။ ကျွန်မ အများကြီးဝမ်းသာပါတယ် .. ။ အခုလို ဆုတောင်းစာတွေ ဘလော့ခ်မှာရော အပြင်မှာပါရတာ ကျွန်မ မျက်ရည်တောင်ဝဲမိပါတယ် .. ။
December 13, 2007 @ 2:26 am Reply	Happy birthday!!!!
Comment by lwinmoe
December 13, 2007 @ 3:06 am Reply	မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေနော်ညီမလေးရေအတိုင်းထက်အလွန် ပျော်ရွှင်မှုတွေဘ၀မှာကြုံတွေ့ရပါစေနော်ဆုတောင်းသွားပေးတယ်
December 13, 2007 @ 4:04 am Reply	Happy Birthday!! Nyi Ma Lin let!!!May you be ever stronger for your desire for Burma!!May you be successful in your interested professional fields!!May you beahappy long life you’ve wanted!!
December 13, 2007 @ 6:23 am Reply	happy birthday ပါ လင်းလက်🙂
December 13, 2007 @ 9:28 am Reply	It is better to createalittle star than to cry for the moon.
Comment by red bodhi
December 13, 2007 @ 9:58 am Reply	Happy Birthday Lin Let ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ၊ အသက် ရာကျော်ရှည်ပါစေ၊ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါယ်
Comment by Chit Lay Pyay
December 13, 2007 @ 1:44 pm Reply	အစ်မရေ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေနော်။ နောက်နောင်လည်း ဒီထက်ပိုပြီးတိုင်းပြည်အကျိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။ မျှော်မှန်းထားသမျှ ကိုအခက်အခဲမရှိပဲအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေနော်။ ပျော်ရွှင်ပါစေအစ်မရေ။
Comment by Winkabar
December 13, 2007 @ 3:13 pm Reply	အားလုံး ကျေးဇူးပါရှင်။ မွေးနေ့အတွက် ရေးပေးကြတဲ့ စာတွေကို အမှတ်တရအနေနဲ့ သိမ်းထားချင်တာမို့ စီဗောက်စ်က ဆုတောင်းစာတွေကို ကျွန်မ ဒီနေရာမှာ အမှတ်တရအဖြစ် ကူးယူဖော်ပြလိုပါတယ် .. ။
3) 13 Dec 07, 02:14Myo Chit: HAPPY BIRTH DAY TO YOU HAPPY BIRTH DAY TO YOU HAPPY BIRTH DAY DEAR LIN LIN HAPPY BIRTH DAY TO YOU
24) 13 Dec 07, 21:07happy: happy birthday wish all your dreams come true
December 13, 2007 @ 3:37 pm Reply	same to you, baby lay
December 13, 2007 @ 3:45 pm Reply	ညီမလင်းလက်…,Teen age ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဒီမွေးနေ့လေးဟာ ပျော်ရွှင်မှု အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသော မမေ့နိုင်စရာ အမှတ် တရနေ့ကလေးတနေ့ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ…။
Comment by ညီလင်းသစ်
December 13, 2007 @ 10:06 pm Reply	27) လူမော်: မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ခင်ဗျာ…။
33) အောင်သူ: မွေးနေ့ ဆုတောင်း နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ခွင့်လွတ်ပါ။13 Dec 07, 23:18အောင်သူ: ညီမလေးလင်းလက် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ…
December 14, 2007 @ 2:24 am Reply	happy birthday, nyi ma….
December 14, 2007 @ 5:17 am Reply	အရောက်နောက်ကျပေမယ့် ညီမလေးအတွက်Birthday wish လုပ်ပေးနိူင်ပါသေးတယ်နော်။
December 14, 2007 @ 8:44 pm Reply	သမီးရေ..ဒီရက်တွေက ဘလော့တောင် မလည်နိုင်တဲ့ ဘ၀.. ခုမှ နောက်ကျ ရောက်လာတာ ခွင့်လွှတ်နော်..လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ နော်…ချစ်ခင်စွာဖြင့် အန်တီ
December 15, 2007 @ 4:51 pm Reply	မင်္ဂလာပါ လင်းရေ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူများနဲ့ အတူတကွ နေထိုင်နိုင်ပါစေနော်။ ကျန်မာရွှင်လန်းပြီး နိုင်ငံ့အကျိုးကို သည့်ထက်မက သယ်ပိုးနိုင်သောသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ…
December 16, 2007 @ 10:14 am Reply	happy Birthday
December 22, 2007 @ 9:01 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI